I-china yodongwe inkanyamba edweliswe ngomgodi mveliso kunye nabathengisi | YUNFENG
I-Ceramic Cyclone edweliswe eMigodini
Iindawo zomdongwe zeemilo ezahlukeneyo ezenzelwe iimfuno zabathengi * Izinto eziluncedo: ukunxiba-ukuxhathisa, ukumelana nefuthe, ukwakhiwa okufanelekileyo, njl., Ukusebenza kwayo kwethiyori kuyalingana namaxesha angama-260 esinyithi se-manganese, i-chrome yentsimbi, amaxesha angama-170. Ngaba ngokukuko ukwandisa ubomi benkonzo yokunxiba iinxalenye. * Kuthathwe indawo yesicelo: Iindawo zokufaka isicelo: Ioyile, imigodi, amatye okusila, izixhobo zamandla kunye namanye amashishini kumphezulu wesixhobo okanye izinto ezihambisa l ...
Iindawo yodongwe iimilo ezahlukeneyo elicwangcisiweyo ngokweemfuno zabathengi
* Izinto eziluncedo: ukunxiba ukuxhathisa, ukumelana nefuthe, ukwakhiwa okufanelekileyo, njl., ukusebenza kwayo kwe-theory kukulingana namaxesha angama-260 esinyithi se-manganese, i-chrome yentsimbi, amaxesha angama-170. Ngaba ngokukuko ukwandisa ubomi benkonzo yokunxiba iinxalenye.
Umdibaniso wobungqongqo obuphezulu be-ceramic kunye ne-elasticity ephezulu yensimbi inika umbhobho izinto ezingenakulinganiswa njenge-abrasion enganyangekiyo, ukumelana nobushushu kunye nezinto ezinganyangekiyo zomhlwa ukuze zisetyenziswe kumacandelo okuphehla umbane, isinyithi, imigodi, kunye nomzi mveliso weekhemikhali njl. izibonelelo ngaphezulu kwemibhobho yentsimbi, imibhobho yamatye, kunye nemibhobho yentsimbi yeplastiki.
Umsebenzi we-alumina ceramic liner tube:
Ukumelana High banxibe
1. Ukuxhathisa ukunxiba yodongwe kungaphezulu kwamaxesha ali-10 kwisinyithi.
2.Umaleko omelele kakhulu wokunxiba. (Ngokweemfuno zomsebenzisi yonyusa okanye yehlise umaleko wokunxiba 6mm-9mm)
Ukuchithwa okuphindwe kabini
1.Ukusetyenziswa kweethayile ezichasayo, iithayile phakathi kwesakhiwo soxinzelelo ngamacala amathathu ombuso oxineneyo.
2. Umbhobho ojikelezileyo une-4-6 umngxuma oqinileyo wokungena, ungena ngaphakathi kwiithayile zomngxunya wombindi we-cone, odityaniswe kunye nodonga lwangaphandle lombhobho wentsimbi.
Imibhobho eyenziwe ngodongwe ilula kunemibhobho yeengxubevange, imibhobho yentsimbi ephothiweyo kunye nemibhobho yamatye ephosiweyo enciphisa iindleko zothutho kwaye yenza ukuba imibhobho ibe lula ukuyifaka.
Imibhobho edityaniswe ngentsimbi edongwe ngokulula inokudityaniswa nge-welding okanye ngeeflanges kunye nezihlanganisi ezithambileyo ezilula.
Ubungakanani 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (D)
Ubungakanani 1200 (L) * 1000 (W) * 800 (H)
Ubunzima .21.2 T
Egqithileyo Irabha yodongwe yelineri edibeneyo kunye nealumin tiles zeceramic kunye nerabha yendalo
Okulandelayo: Iipesenti ezingama-95 zeAlumina zokuLuhlu lweCeramic kunye neMibhobho yentsimbi ngokuthe ngqo eyenziwe kwiFektri yaseChina